Phil Jones, Carrick, Blind Iyo Rojo Oo Ka Maqnaanaya Kulanka Man United v Chelsea
HomeWararka MaantaPhil Jones, Carrick, Blind Iyo Rojo Oo Ka Maqnaanaya Kulanka Man United v Chelsea
Kooxda Manchester United ayaa u safri doonta garoonka Stamford Bridge ee Chelsea Sabtida, iyadoo ay ka maqan yihiin Michael Carrick, Daley Blind, Phil Jones, Marcos Rojo iyo Jonny Evans.
Raxantan ciyaartooyada ah, ayaa waxa ay intooda badani ku maqnaan doonaan dhaawac, halka Evans uu maqnaanayo ciyaartiisii u dambaysay ee lix ciyaarood oo ciyaaraha laga ganaaxay.
Tababare Louis van Gaal ayaa dhaawacyadan iyo ganaaxa isbarkan ee ay ku maqan yihiin raggii ugu muhiimsanaa kooxdiisa khadka dambe ee difaaca iyo khadka dhexeba, tii ugu xumayd ee soo marta intii uu joogay Manchester United.
Jones iyo Blind ayaa ku dhaawacmay ciyaartii Manchester City ee toddobaadkii hore iyadoo uu labadoodaba dhaawaca u geystay Cincent Kompany oo difaaca uga ciyaara City. Carrick ayaa waxa uu isna wax ka qabaa jilibka taas daraadeedna ma ciyaari karo kulanka Chelsea ee Sabtida. Sidoo kale, Rojo ayaa la sheegay in uu ka cabanayo muruqyada caloosha oo aad u xanuunaya, taas daraadeedna kooxdiisa uma raacayo magaalada London ee ay ka dhisan tahay Chelsea.
Dhaawacyadani waxay fursad siinayaan Luke Shaw iyo Ramadel Falcoa oo uu tababare Van Gaal ugu yeedhay in ay u ciyaaraan kulanka Chelsea.
Louis van Gaal oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in afar ciyaartoy oo saftay kulankii City ay ka maqnaan doonaan kooxdiisa toddobaadkan taasina ay waxyeello weyn ku tahay.
“Afar ciyaartoy ayaa naga dhaawacmay kooxdii aanu kula ciyaarnay sabtidii, waana dhibaato weyn. Rajo fiican ayaanu ka qabnay inay soo kabanayaan laakiin may noqonin sidaas. Carrick wuu maqan yahay, Rojo wuu maqan yahay, sidoo kale Blind iyo Jones ayaa maqnaanaya.” Sidaas ayuu yidhi Louis van Gaal.
“Waa arrin aad u xun, waayo Rojo iyo Jones labaduba dhinac bidix iyo dhexda difaacaba way ka ciyaari lahaayeen. Evans ayaa isna ganaaxan, mana haysano fursado badan. Blind iyo Carrick waxay ka ciyaari karaan dhexda difaaca xigta, laakiin ma joogaan, waxase halkaas ka ciyaari doona Wayne Rooney.
“Jones waan beddelay ciyaartii Manchester City waayo dhaawac ayuu ahaa, waad arkayseen sidii uu Kompany ku sameeyey Blind, markaa Rojo ayuun baa layaab leh, waayo wuu nabad qabay ciyaartaas.” Ayuu raaciyey.
Louis van Gaal waxa uu sheegay in Chelsea ay ka rajo fiican tahay kooxaha kale oo dhan, maadaama ay ka sarrayso dhibco badan, isla markaana haddii uu Jose Mourinho barbar dhac la galo Manchester United ay farxad weyn u ahaan doonto.
Goolwade Tim Howard Oo Rikoodh Cusub Oo Badbaadinta Goolasha Ah K-aduunka U Dhigay